पछिल्लो २४ घण्टामा ९० जना डिस्चार्ज, हालसम्म ६७४ जना संक्र`मित निको भए !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/पछिल्लो २४ घण्टामा ९० जना डिस्चार्ज, हालसम्म ६७४ जना संक्र`मित निको भए !!
पछिल्लो २४ घण्टामा ९० जना डिस्चार्ज, हालसम्म ६७४ जना संक्र`मित निको भए !!
काठमाडौं- नेपालमा बुधबारसम्म ६७४ जना कोरोना संक्रमित निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जन संख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा थप ९० जना कोरोना सं`क्रमित नि`को भएर अस्पताल बाट डिस्चार्ज भएका छन् । उनीहरुमध्ये २ जना महिला र ८८ जना पुरुष रहेका छन् ।
योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या ६७४ पुगेको हो । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा बुधबार थप २ सय ७९ जनामा कोरोना संक्र`मण पु`ष्टि भएको छ । यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्र`मितको संख्या ४ हजार ३६४ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले नियमित लाइभ अपडेट मार्फत नेपालमा थप २ सय ७९ जनामा कोरोना संक्र`मण पु`ष्टि भएको जानकारी दिएका हुन् । गौतमका अनुसार नयाँ थपिएका संक्र`मित मध्ये २ सय ७५ जना पुरुष र २२ जना महिला रहेका छन् ।
उनका अनुसार गत २४ घण्टामा पी सी आर विधि बाट ४ हजार ७ सय १४ वटा नमूना परीक्षण भएको छ । यस्तै आर डी टी विधि बाट ६ हजार ७ सय २२ वटा नमूना परी`क्षण भएको छ ।
यस्तै नेपालमा हाल सम्म पी सी आर विधिबाट १ लाख १० हजार ७ सय ४४ वटा नमूना परीक्षण भएको छ भने आर डी टी विधि बाट १ लाख ७२ हजार ८ सय ८० जनाको कोरोना परी`क्षण गरिएको छ ।
नेपालमा कोरोना’को कारण नि’धन हु’ने’को संख्या ७० पुग्यो
झापामा ९ र सुन-सरीमा २ जना कोरोना संक्र`मित थपिए !